Jereo ny fivoaran'ny Amazon Kindle | Ireo mpamaky rehetra
Jereo ny fivoaran'ny Amazon Kindle
Tiako na tsia ny teny eReader na boky elektronika dia matetika mifandray amin'ny Amazon Kindle, fitaovana ahafahantsika mankafy ny e-book hatramin'ny 2007 raha naseho ny kinova voalohany an'ity fitaovana ity. Nanomboka teo dia niova be ity gadget ity, ary afaka nahita ny niandohany avy tamin'ny fotsy ka hatramin'ny mainty, ny fomba nanjavonan'ny klavier fizika nampidirina na ny fomba nanampian'ny hazavana miharo izay ahafahantsika mamaky amin'ny aizina tanteraka.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hataontsika a famerenana mahaliana ny Kindle rehetra nisy ary nahatratra ny tsena. Hahafantatra ny sasany amin'ireo mampiavaka azy sy ny mombamomba azy isika, hahita sary, ary hahafantatra ihany koa ireo te hahafanta-javatra amin'ny fitaovana Amazon.
Mazava ho azy fa hijery ny ho avy ihany koa isika ary handinika ny tenantsika, ary ambonin'izany rehetra izany dia handinika ny fomba itiavanao ny Kindle amin'ny ho avy.
4 Amazon Kindle 3 na Keyboard
5 Amazon Kindle 4 sy Kindle Touch
6 Amazon Kindle 5 sy Kindle Paperwhite
8 Kindle 6, Papwehite Kindle ary Kindle Voyage
8.1 afo 6
8.3 Voyage Kindle
9 Ny hoavin'ny Kindle
Ny Kindle voalohany teo amin'ny tantara dia natolotry ny Amazon tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Novambra 2007 ary amidy any Etazonia fotsiny izy io miaraka amin'ny tarehimarika fivarotana tena tsara.
Ity fitaovana ity dia tsy tena kely na lava paosy, satria nametraka efijery 6-inch toy ny ankehitriny izy, fa kosa tamin'ny fitaterana kitendry ara-batana dia nitombo be ny habe
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra dia afaka milaza izany aminao izahay ny efijery dia nanolotra vahaolana ho an'ny mpampiasa 600 x 800 teboka miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra volondavenona 4. Manomboka izao dia ho hitantsika ny fihatsaran'ny fivoaran'ny efijery.
Farany dia tsy maintsy ataontsika ny boaty nanaterana an'ity Kindle 1 ity, ary hitanao amin'ny sary asehonay anao eto ambany;
Ny Kindle faharoa, taorian'ny fahombiazan'ny varotra voalohany, dia niandry ela ary tsy natolotry ny Amazon hatramin'ny volana febroary 2009.
Ny zavatra manaitra indrindra amin'ity Kindle vaovao ity dia ny endrika vaovao nohavaozina, na dia notazonina aza ny kitendry fizika izay nahatonga ity fitaovana goavambe sy tsy matanjaka ity. Ny fanatsarana dia zava-dehibe ihany koa ao anatiny ary ny efijery dia mitazona ny habeny sy ny famahana fa tonga teny amin'ny tsena afaka mamerina mamorona tantara 16 volondavenona. Ny fitehirizana anatiny koa dia nitombo hatramin'ny 2 GB, ka nanala ny fahafaha-mampiasa karatra microSD.
Ity Kindle 2 ity dia afaka nanohana endrika bebe kokoa noho ny teo alohany ary, ohatra, afaka nanolotra fijerena rakitra PDF.
Taorian'ny nidiran'ny Kindle 2 teny amin'ny tsena kinova na fiovana isan-karazany amin'io maodely io. Anisan'ireny, ny tena nahomby tamin'ny tsena dia ny Kindle DX, Kindle miaraka amin'ny efijery 9,7-inch goavambe.
Amazon Kindle 3 na Keyboard
Ilay Kindle 3, fantatra amin'ny anarana hoe Kitendry Kindle Nalefa teny an-tsena izy tamin'ny volana aogositra 2010 ary mbola tao an-tsainy ny kitendry fizika izay tsy nanana kojakoja mivaingana mihitsy.
Ny fiakarana amin'ny lafiny fanatsarana ny maodely teo aloha dia zava-dehibe, ary izany no izy Hitanay ny kinova voalohany tsy nisy fifandraisana 3G, ary amin'ny Wifi ihany no nisy vidiny ambany kokoa. Io fanao io dia nanan-kery mandraka androany ary ny Kindle tsirairay dia hita amin'ny kinova roa samihafa arakaraka ny fifandraisany.
Ity fitaovana ity dia nanohy nanatsara ny famolavolana, ny ampahany nampihena ny tenany ary nampihena ny lanjany. Ankoatr'izay dia nitombo hatrany amin'ny 4 GB ny tahiry anatiny.
Miaraka amin'ity Kindle 3 ity dia nisy fiovana ihany koa, natao batemy indray ho Kindle DX, na dia tamin'ity indray mitoraka ity aza dia nanana ny teny koa izy Graphite.
Amazon Kindle 4 sy Kindle Touch
Tamin'ny volana septambra 2011, ny Kindle 4, izay nanapahan'i Amazon hevitra farany ny hanafoanana ny kitendry ara-batana izay saika tsy nisy nahita nampiasa, ary naka dian-tongotra lehibe fotsiny izy io izay nahatonga ny fitaovana ho lehibe loatra. Ny fanafoanana ny klavier dia midika fa ity eReader ity dia maivana ary maivana ihany koa satria nihena hatramin'ny 170 grama ny lanjany.
Ny Kindle teo aloha dia nilanja efa ho 300 grama, ka nankasitrahan'ny mpampiasa betsaka io fihenan'ny lanjan'ilay fitaovana io.
Tsy dia be loatra ny vaovao ao amin'ity Kindle ity, na dia nisy tsimbadika an'ity fitaovana ity aza natsangana teny an-tsena, natao batemy ho Kindle Touch ary ahitantsika efijery maro-mikasika izay namela nanodina ny pejin'ilay boky tamin'ny fikasihana ny efijery fotsiny.
Amazon Kindle 5 sy Kindle Paperwhite
Ny volana fahadimy tamin'ny Kindle dia tonga tamin'ny Oktobra 2012 ary tena revolisiona ho an'ireo rehetra tia ny eBooks. Ary ny fitaovana Amazon dia nanohy nanatsara ny famolavolana sy ny fahombiazany, nefa koa nampiditra ny jiro any aoriana izay ahafahantsika manomboka mamaky amin'ny efitrano misy hazavana kely na aizina tanteraka mihitsy aza.
Andao handeha amin'ny ampahany. Amazon dia nanolotra ny Kindle 5 izay tohin'ny Kindle 4, somary maivana kokoa, miaraka amin'ny efijery 6-inch mitovy amin'izany raha toa ka manana mifanohitra ambony kokoa izy ary koa bateria lehibe kokoa izay mamela ny mpampiasa hanana fizakan-tena hatramin'ny 1 volana.
Miaraka amin'ity Kindle 5 ity dia tonga ny Kindle Paperwhite, izay tena revolisiona, fa tsy noho ny jiro aoriana satria nanolotra efijery misy mifanohitra 25% kokoa koa izy, miaraka amin'ny famahana ny 1024 × 758 sy 212 ppi. Ny bateria dia naharitra hatramin'ny 8 herinandro na izay mitovy 2 volana.
Mazava ho azy fa samy hafa ny vidin'ireto fitaovana roa ireto ary miharihary ny tsy fitovizany.
Tao anatin'ny herintaona ny kinova voalohany an'ny Kindle Paperwhite Amazon dia nandefa ny Kindle Paperwhite 2 miaraka amin'ny vaovao mahafinaritra 3;
Sarimihetsika tsara kokoa misy fifanoherana tsara kokoa ary mamela hamaky bebe kokoa
Mpikirakira vaovao manatsara ny fisokafan'ny eBook na ny pejy fihodina
Fanatsarana ny fanazavana ny fitaovana manome fijerena efijery tsara kokoa amin'ny toe-java-mazava na maizina
Fitaovana iray nitovy tamin'ny teo aloha izay navoakan'i Amazon, saingy rehefa napetraka teo alohan'ilay iray ny fahitana dia hita haingana ireo fanatsarana. Ny vidiny dia tsy niova na manaraka ny tsipika naroson'ny magazay lehibe virtoaly.
Kindle 6, Papwehite Kindle ary Kindle Voyage
Volana vitsivitsy lasa izay dia nanao ny fampisehoana e-book farany azy i Amazon. Tao anatin'izany no nanolorany modely vaovao 3 vaovao ho antsika; ny Kindle 6, fanavaozana vaovao ny Kindle Paperwhite sy ny Kindle Voyage, eReader miavaka izay, na izany aza, mbola tsy tonga tany amin'ny ankamaroan'ny firenena manerantany, ary mistery lehibe tsy hay hazavaina ny an'ny maro.
Nantsoina ity Kindle vaovao ity Fandrehitra ifotony ary izany dia a fanavaozana ny Kindle nentim-paharazana, izay ampidirina eo amin'ny lafiny fisaintsainana ny efijery fanatsarana nihatsara. Ho fanampin'izany, nohatsaraina koa ny endriny ary nampiana fiasa diksionera isan-karazany sy fanamafisam-peo mora kokoa.
Ny vidiny dia iray amin'ireo zavatra vitsivitsy izay tsy niova momba ity maodely ity, ary izany dia mitohy mitentina 79 euro izay mametraka azy mifandraika amin'ny kalitao sy ny vidiny ho iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra amin'ity karazana ity izay isan'ny hitantsika. eny an-tsena.
Na eo aza ny zava-misy fa manantena fanavaozana lalina ity fitaovana ity ny tsirairay, farany dia nanjary tweaks vitsivitsy fotsiny talohan'ny niseho teo amin'ny sehatry ny Kindle Voyage izay tena fandrosoana lehibe, na dia taorian'ny nahitanay ny olana misy aza dia mbola mijaly izahay ankehitriny .
Mazava ho azy, tsy misy misalasala ny kalitaon'izany Kindle Paperwhite fa amin'ny androny dia efa nanandrana isika ary izany ve ity dia fitaovana miavaka izay aseho ho iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena.
Miaraka amin'ireo maodely efa hitantsika Ny orinasa notarihin'i Jeff Bezos dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana septambra 2014 ny Kindle Voyage vaovao, eReader premium izay nanatsara be an'ireo fitaovana farany natolotr'i Amazon.
Vita amin'ny fitaovana avo lenta, miaraka amin'ny efijery izay manome traikefa rehefa mamaky boky izay tena sarotra resahina ary miaraka amin'ireo fiasa azo antoka fa be ny eBooks sy pejy iray miavaka.
The Kindle Voyage dia mpanjakan'ny eReaders, saingy indrisy fa manana ny olana izy anio amidy amina firenena vitsivitsy monja, ary ohatra efa ho herintaona izay ny fampisehoana ofisialy azy tany Espana dia mbola tsy fantatsika ny daty tokony hanazavana azy io.
Ny hoavin'ny Kindle
Sarotra ny maminavina ny hoavin'ny Kindle ary ilay Kindle Voyage dia efa fitaovana mihoatra ny mahaliana ary miaraka amin'ny famaritana tsara. Angamba bateria masoandro, efijery loko na fisehoan'ny penina ahafahantsika mandray an-tsoratra ao amin'ny eBooks aminà fomba tsotra kokoa dia ny sasany amin'ireo fanatsarana azonay jerena amin'ny Kindle manaraka izay mahatratra ny tsena, fa mandritra ny fotoana rehetra ny eritreritra fa tsy misy fampahalalana momba ny fitaovana ho avy.
Ny volana septambra sy oktobra dia matetika ireo izay ampiasain'i Amazon amin'ny fampisehoana amin'ny fomba ofisialy ny vaovaony, noho izany dia mila mitandrina tsara isika ho an'ny Kindle amin'ny ho avy mety ho eo akaiky eo ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Jereo ny fivoaran'ny Amazon Kindle
mikij1 dia hoy izy:
Heveriko fa ny fanesorana ny kitendry ara-batana dia dingana lehibe ary koa ny efijery mikasika izany, ary tsy azoko izany, toa tsy ankasitrahan'ny olona sasany izany.
Na izany na tsy izany, ny maodely farany farany dia tsy mampiseho afa-tsy ny fanatsarana kely antsika amin'ny fisehoan'ny efijery (mifanohitra sy ny vahaolana), raha ny marina, dia zara raha tsikaritra (na tsy hitako izy ireo) na eo aza ny hafetsena anaovana dokam-barotra.
Ny Kindle Voyage dia tsy afaka nahita azy mivantana aho nefa toa hitako fa ny fihatsarany dia bebe kokoa amin'ny ambaratonga hatsarana sy endrika (efijery mitovy haavo amin'ny bezel, lanja mihena, ...) noho ny zavatra hafa rehetra. Araka ny voalazanao dia mistery fa tsy tonga aty amin'ny firenentsika izy io. Angamba noho ny fanadihadiana an-tsena izay nilaza fa tsy hamidy tsara izy io noho ny vidiny lafo.
Tena te hahita ny Kindle manaraka aho ary manantena aho fa amin'ity indray mitoraka ity dia misy ny fanatsarana tena izy sy marobe eo amin'ny sehatry ny fitaovana. Ny stylila mandray an-tsoratra sy ny famandrihana masoandro dia mety. Mikasika ny loko tsy atokisako intsony, efa an-taonany maro no miandry izy ireo saingy ilaina ny mahita ny zavatra ataony amin'i Liquavista. Na izany na tsy izany, ity haitao lamba ity dia somary tsy mitovy amin'ny ranomainty elektronika nentim-paharazana (mandany bateria bebe kokoa izy io, na dia manome zavatra hafa aza) ka tokony hitandrina isika.
Saika ho afa-po aho raha manatsara kokoa ny mifanohitra amin'izany amin'ny alàlan'ny fanolorana ambadika fotsy kokoa ... fa tena karazana folio fotsy. Mazava ho azy fa miankina amin'ny E Ink izy io ary tsy mazava fa manana toerana fanatsarana toy izany ny teknolojia.
Mamaly an'i mikij1
Maria_25 dia hoy izy:
Araka ny voalazan'ny lahatsoratra tsara, ny miresaka boky elektronika dia mifandraika amin'ny Kindle. Fantatro ny fivoaran'ny resadresaka izay noresahin'izy ireo, nanana karazana Amazon Kindles maromaro aho. Izaho no voalohany, nanomboka teo aho dia nitsambikina tamin'ny maodely ambonimbony kokoa, hatramin'ny nanararaotako ny tolotra iray avy amin'ilay mpampitaha Amazon. http://savemoney.es/ Novidiko ny Kindle Paperwhite 3G.
Miharihary fa izy ireo dia iray amin'ireo boky elektronika tsara indrindra, hatramin'ny nandalovako ilay voalohany, tsy mbola nieritreritra ny hanova marika hafa aho, ny kalitao hatrany am-boalohany dia nampiavaka azy ireo, farafaharatsiny, ho ahy, Amazon dia manome ny tsara indrindra amin'ny eReaders.
Valiny tamin'i Maria_25
Mihoatra noho ny fitaovana finday, tiako ny fanatsarana firmware lehibe. Kindle dia zara raha nanohina ny famakiana firmware azy, ny safidin'ny margin dia mampijaly ny efijery. Safidy vitsivitsy amin'ny haben'ny endri-tsoratra, tsy azonao atao ny mametraka endri-tsoratra fanampiny ...
Na izany na tsy izany dia resy tamin'ny hazakazaka i Amazon amin'izao fotoana izao, heveriko fa ny kobo dia nihoatra lavitra azy ireo tamin'ny haavon'ny fitaovana / vidiny. Tsy misy dikany ny fividianana dia rehefa misy h2o, na dia ratsy be aza ny diksionera kobos, raha sanatria tsy maintsy mankany Amazon ianao noho io antony io, ny zavatra azo lojika dia ny pw2 raha mila maivana na fototra ianao raha tsy tianao izany. Saingy ivelan'ny tsena mifandraika amin'ny vidiny / kalitao ny dia. Lafo loatra amin'ny fahasamihafana misy pw2.
Ary izao mba hamaranana ny diany, kobo dia mitondra antsika ny kobo glo hd miaraka amin'ny efijery iray amin'ny haavon'ny dia fa amin'ny vidin'ny pw2. Amin'ny volana Jona dia heveriko fa azo vidiana any Espana izany. Tsy maintsy mifoha be i Amazon.
Torohevitra 10 hankafizana boky